Baro magacyada cusub ee maalmaha oo af Soomaali ah. Waxaa ka mid ah Hobala, Wableey iyo Dabra. | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Baro magacyada cusub ee maalmaha oo af Soomaali ah. Waxaa ka mid...
Baro magacyada cusub ee maalmaha oo af Soomaali ah. Waxaa ka mid ah Hobala, Wableey iyo Dabra.
Waxaa magaalada Jabuuti shirk u yeeshay khubaro ka soo tala bixisa sidii loo bedali lahaa magacyada tirsiga maalmaha iyo bilaha isla markaana looga dhigi lahaa Af-Soomaali.
Guuddi arrintan loo xilsaaray oo ka kala socday deegaannada Soomaalida ayaa soo saaray kal-tirsi cusub oo ay Soomaalidu gaar u leedahay.
Ibraahim Axmed Cali oo ka mid ah guddigaasi ayaa sheegay in arrintan ay dood badan ka yeesheen khubaradii ka qeyb galeysay.
“Maalmaha cusub ee af-Soomaaliga la isku raacay ee la ansixiyay waa Cadceeda(Axadda), Hobala(Isniin), Wableey(Talaado), Dabra (Arbaco), Fabeeleey(Khamiis), Dusa(Jimce) iyo Diimiley(Sabti),” ayuu yiri .
Af-Soomaaliga ayaa waxaa ku jira erayo badan oo laga soo ammaahday luuqado kala duwan.
Waxaa kamdi ah luuqadaha ay Soomaalida ka soo ammaahdeen Taliyaaniga, Carabiga, Ingiriiska iyo Faransiiska.
Erayadan la soo ammaahday ayaa intooda bada noqday kuwa dhaqangala oo qaar kamid ah xitaa aan Af-Soomali sax ah loo hayn.
Previous articleIlhan Cumar oo loo magacaabay xil muhiim ah (BBC)
Next articleKu dhawaad 5 wiil oo Soomaali ah oo 48 saac gudahood dil loogu geystay Koonfur Afrika.